Baolina kitra - "CAN 2021" :: Mety ho azon'ny mpijery hatrehana ny lalaon'ny Barea sy Côte d’Ivoire • AoRaha
Baolina kitra – « CAN 2021 » Mety ho azon’ny mpijery hatrehana ny lalaon’ny Barea sy Côte d’Ivoire
Any amin’ny kianjan’i Barikadimy, Toamasina, no hanatanterahana ny lalaon’ny Barean’i Madagasikara sy ny Elefantan’i Côte d’Ivoire, amin’ny volana novambra ho avy izao, raha tsy misy ny fiovana. Mety ho fihaonana azon’ny mpijery hatrehina mivantana ity lalao miverin’ny firenena roa tonta, izay tafiditra amin’ny fifanintsanana hiadiana ny ho tompondakan’i Afrika “Can 2021” ity, araka ny nambaran’ny loharanom-baovao avy ao amin’ny FMF.
« Azo antenaina ny hisian’ny mpijery amin’io lalao io satria efa mizotra tsikelikely any amin’ny fahafahana manatanteraka lalao ara-panatanjahantena isika, raha ny kabarin’ny Filohan’ny Repoblika. Na izany aza, tsy maintsy ferana ny isan’ny mpijery mba ho fanajàna ny elanelana iray metatra, miaraka amin’ny fampiasana ny tsiranoka mamono tsimok’aretina, araka ny takian’ny Kaonfederasiona afrikanin’ny baolina kitra (CAF) », hoy Andrianony Victorien, filoha vonjimaikan’ny Federasiona malagasin’ny baolina kitra (FMF).
Efa eo am-pandinihana ny fahafahana manokatra ny kianja ho an’ny mpijery ny Federasiona, amin’izao fotoana izao. Daty efatra no vinavinaina: 14, 15, 16 ary 17 novambra 2020. Miankina amin’ny famandrihana sidina hiverenan’ny Barean’i Madagasikara no andro hanatontosana an’izany lalao miverina izany.
Judo – Tompondakan’i Afrika Hampiantrano ny fifaninanana i Madagasikara
Tranga tany Malaimbandy :: Andiana zandary notafihin’ny jiolahy teny an-dalana
Basket-Fifanitsanana :: Baraingo ny fampiantranoana ny Afrobasket Men